Avy hatrany dia namaly ireo fanakianana an`ity andrimpanjakana ity ny filohany, Rivo Rakotovao. Nolazaina fa fanagiazana ireo volavolan-dalàna izay efa nandalo teny amin`ny Antenimieram-pirenena kanefa dia nogiazana sy tsy navoaka ao amin`ny Antenimierandoholona amin`izao fotoana izao. Tsy maintsy dinihana avokoa ireny lalàna ireny ary toa misy am-pitaka ihany ny fandefasana ny volavolan-dalàna eny anivon`ny Antenimierandoholona, hoy izy, satria hiandrasana hatramin`ny ora farany ireny lalàna ireny vao alefa eny kanefa dia kely dia kely ny fotoana raha oharina amin`ny hamaroany. Mariky ny tsy fanajana izany kanefa fanajana ny andrimpanjakana sy fanajana lalàna no tokony hataon`ny fanjakana. Maro ireo volavolan-dalàna mandalo eto amin`ny Antenimierandoholona toy ny fananan-tany na koa toaka gasy kanefa tsy tonga manatrika ireo depiote manolotra ireo lalàna ireo ary azo hamarinina izany. Naverimberin`ny filohan`ny sena hatrany fa tsy « Boîte aux lettres », na tahaka ny fandraisana taratasy avy any amin’ny paositra ny andrim-panjakana tarihany ka iray andro mialoha ny famaranana ny fivoriana vao alefa hodinihana ny lalàna. Tsy fomba fiasa izany. Aleo kianin`ny mpanao politika sy ny fanjakana toy izay hitarainan`ny olona hoe “jereo ny ataon`ny senatera fa manao petatoko”, hoy hatrany ny fanazavana.